SIDA LOO FAAFIYO GUNTINTA LAUREL, OO DHAN WAXAAD U BAAHAN TAHAY SI LOO YAQAAN BARADIIDKA HIWAAYADDA - DHIRTA GUDAHA
Kobcinta dhirta adigoo raacaya waa habka ugu caansan ee koritaanka daaqsintooda iyo burcadbadeedda arrintani waa mid fog. Horumarka masraxa ee laga goynayo goynta ma aha mid adag, gaar ahaan marka la eego shucuurta soo socota.
Dibudhisidda laamoolka guriga: gooynta goynta
Wixii faafinta daaqsinka iyadoo la adeegsanayo habkan, gooyn yar oo qoryo ah oo laga heli karo warshad kale ayaa ku habboon. Haddii aadan weli haysan qof qaan-gaar ah oo qaan-gaar ah, markaa waxaad iibsan kartaa qaybaha muhiimka ah si gooni ah.
Marka ay sii wadaan goynta laurelka
Gubashada Laurel waxaa badanaa lagu sameeyaa bilawga maalmaha ugu horeeya diiran, jarida caleemaha bisha Abriil ama horraantii Juun.
Warshadda la doortay (doorbidayaa caleemaha sanadlaha ah ee aan wali wakhti u helin qoryaha) waa inay gabi ahaanba ka baxaan dormancy jiilaalka.
Beerta qaar ka mid ah geedi socodka jarida xilliga dayrta qotodheer, laakiin kiiskan ma awoodi doontid inaad gashid gooynta beerta ama beerta.
Sida loo diyaariyo gooyn
Wixii miro goynta, laamihii laastikada, laga qaaday qaybta dhexe ama qaybta hoose ee caleemaha waxaa la googooyaa 6-8 cm midkiiba. Booska noocan oo kale ah waa inuu leeyahay ugu yaraan saddex internodes (saddex meelood oo bilaash ah inta udhexeysa meelaha dhibcaha ee caleemaha) iyo qayb jarjaran ah qaybta hoose.
Waraaqaha ugu horreeya ee gebi ahaanba waa laga saaraa, oo kuwa sare waxay gooyaan waxoogaa yar, iyagoo kala tagaya kala badh caleen iyaga oo ujeedadoodu tahay uumi yaraanta qoyaanka.
Waa muhiim! Marka la jarayo jirida, mindi waa in la dhigaa wax yar ka hor inta uusan gaarin dhamaadka biqil, ka dibna jilibka waa in la gooyaa oo la socdaa unugyada ku wareegsan. Waxay soo baxdaa cidhibtaas lafteeda, meel yar oo ka hooseysa meel hoose.
Sida loo doorto goynta goorta la gadanayo
Haddii aad u baahan tahay guntin dhejis ah, laakiin aadan rabin inaad ka fekerto sida aad iyaga u korin lahayd, markaa waxaad iibsan kartaa nuqulo diyaarsan, nuqullo asal ah.
Waxay ku fiican yihiin beerashada dhul furan, si dhakhso ah ayaad u heli kartaa warshad buuxda leh.
Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aadan iibsan gooynta ugu horeysay, si fiican u baaro. Baaga caleen waxaa badanaa dhaawac gaarsiiya, taas oo sahlan in la arko gooynta.
Waa inaysan jirin koritaan shaki ah oo ku saabsan caleenta, waana inay lahaataa foomka cufan. Iyada oo gooyn overdried noqon doonaa isticmaalka yar.
Sida loo aaso goynta caleemaha
Soo saarida gawsaska laurelka waxaa lagu sameyn karaa laba siyaabood oo waaweyn: adigoo isticmaalaya substrate diyaarsan ama biyo caadi ah.
Root of laorel ee substrate ah
Ciid u wanaagsan in la xidho gooyn laurel noqon doonaa ciid adag, ama isku dar ah ciid iyo peat. Sidoo kale, carrada cagaaran iyo ciid ayaa badanaa loo isticmaalaa (Marka hore, lakabka qasacadaysan ayaa lagu shubay dheriga, ka dibna lakabka dhulka, iyo lakabka birta ah ayaa lagu shubay sare.).
Ka dib, in substrate keentay waa in si fiican loo qoyay iyo gooyn dhirta si qoto dheer ah 1-1.5 cm sida ay u qorshaysay 10x10.
Si loo hubiyo xiriirka wanaagsan ee jarista ciidda, kan dambe ayaa la foorari karaa faraha, iyo si loo ilaaliyo qoyaanka hawada loo baahan yahay, bac caag ah ayaa lagu dhejiyaa dheriga sare ee dheriga (adoo dhigaya meelo u dhow meesha jarida, waxaad ka hortagtaa in ay la xiriirto polyetylen).
Xididaadda guntinta laurel lafteeda waa mid aad u adag, markaa ka hor inta aadan gelin jarjar galka substrate ah, ku daawee kiciyaha kobaca (tusaale ahaan, Kornevin ama Hetero-ax).
Dheriga leh gooyn waa in lagu meeleeyaa aqalka dhirta lagu koriyo ama lagu daboolo weel dhalada ah. Heerkulka ugu fiican ee laastikada, ugu yaraan marxaladda rootingka, jarista waa gudaha + 24 ... +25 (oo leh tilmaamayaasha heerkulka + 16 ... + 20 ° C, gooyntu waxay xidhan doonaan bil ka badan).
Intaa waxaa dheer, in la kiciyo habka lagu sharraxay, waxaa muhiim ah in lagu buufiyo guluub maalinle ah oo biyo ah (laga bilaabo 4-5 buufin) iyo iyaga hawo qaadaan.
Si adag u adeecsan tiknoolajinta jarista, ka dib bil iyo badh ka dib, caleemahaaga waxay sameeyaan xididada. Marka tani dhacdo, waxaa lagu beddeli karaa dheriyo 7-mitir oo leh isla substrate iyo qaabka daryeelka sida ku dhalata abuurka.
Sida loo xidho gooynta biyaha
Wax qarsoodi ah maahan in macaamiil badani badanaa ay ku badan yihiin si caadi ah ama dhalo biyo ah. Waxay u egtahay in habkani aanu ahayn mid la isku halleyn karo sida kan hore, laakiin sidoo kale wuxuu ku habboon yahay dhalashada guusha ee laaluushka.
Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa ku shub 5 sentimitir oo biyo ah oo ku jirta weelka oo jar jar. Weel dhoobo ah ayaa laga tagayaa meel gudcur ah iyada oo aan baddelin biyaha (waxaa kaliya oo kor loo qaadi karaa).
Beeraha qaar, habkani wuxuu u shaqeeyaa si aan fiicnayn, kuwa kalena waxay ka cabanayaan qashinka jarista, laakiin kiis kasta, weli wali waxaa jira fursado aasaasi ah. Si kastaba ha noqotee, ka hor inta aanad ku gelinaynin weelka, waxaa fiican inaad ku sii hayso kiciyaha kicinta ee 24 saacadood, oo dhererkeedu yahay 2-3 cm.
Ma taqaanaa?Si aad si guul leh ugu guulaysato xididka laulel ee biyaha, waxa fiican inaad ka qaadato dareeraha ka soo qulqulaya biyaha, halkaas oo walxaha bayolojiyadeed ee faa'iido leh ay horay u joogaan.
Sida loo aaso gooyn laurel
Beerta dhirbaaxda ah ee laurelku waa wax aan ka duwaneynin dhirta cagaaran, laakiin waxaad weli u baahan tahay inaad ogaato cidda si fiican loo isticmaalo iyo sida saxda ah ee loo wareejinayo geedka meel cusub oo degan.
Waa maxay carrada loo beero laurel
A isku dar ah ciidda ku haboon ee gooyn laamool ee guriga ka kooban yahay laba qaybood oo waaweyn: hoose waa 3-4 cm oo ah dhul soddon, iyo top waa 2-3 cm oo ciid ah. Xulashada ciidda ku habboon waxay noqon kartaa isku dar ah maadada carbonate, oo laga iibsan karo dukaanka beerta.
Waa muhiim! Laga soo bilaabo xilliga beerto, waxaad u baahan doontaa inaad soo celiso dhirta sanad walba, adoo isticmaalaya isla halbowlaha ciidda. Marka uu gaaro da'da shan jir, qaliinka waxaa la sameeyaa afartii sanaba mar.
Sida loo abuuro beero laamood
Gubashada Laurel waxaa ugu wanaagsan ee lagu beeray dheriyo yar yar, sii kordhaya baaxadooda iyaga oo koraya dhirta.
Lakabka biraha ayaa la dhigaa xagga hoose ee taangiga, ka dibna isku darka ciidda waa la shubay, oo si taxadar leh uga saara gooynta ka soo xididdada ka soo horeysay ee koritaanka, waxay la dhigaa qoto dheer oo ah 2 sentimitir. Top of the rusheeyey lakabka yar oo ciid ah oo wax yar qoyan.
Ha isla markiiba daadi warshadda biyo, maadaama ay sabab u tahay huurka badan, cudurada fungal laga yaabaa inay horumaraan.
Noocyada daryeelka ee gooynta
Gooynta xididada uma baahna sida ugu dhow, laakiin wali waa in la ururiyaa si loo daboolo baahiyaha asaasiga ah.
Waraabinta iyo buufinta
Laurel ma aha mid aad u jecel qoyaanka, sidaa darteed waraabinta jarida waa in ay ahaato mid dhexdhexaad ah. Xilliga xagaaga, dhirta waxay ubaahan tahay dareere badan iyo daaweyn dheeraad ah ee xaashida (waxaa lagu bedeli karaa tirtirida qoryaha qoyan), halka xilliga qaboobaha tirada yaraanta si aad u yar loo yareeyo.
Si kastaba ha noqotee, lakabka ugu sareeya ee ciidda dheriga leh warshad waa in had iyo jeer ku jiraa qoyan.
Dharka ugu sareeya ee dhirta yaryar
Sida bacriminta for guntinta of laurel, xeryahooda organic iyo macdanta adag ayaa loo isticmaalaa, taas oo ay fududahay in la helo dukaamada khaas ah.
Beerta qaarkeed waxay ku andacoodaan in xal mullein ay sidoo kale ku haboon tahay ujeedooyinkan, laakiin ayadoo ay ugu wacan tahay qiyaasta qiyaasta, xididdada ayaa si fudud u gubi kara, sidaa daraadeed habkani marxaladda hore waa in la tuuraa.
Soo hel jawaabta su'aasha ah "Sidee loo dacaayadaa goglayda?" - Waa sahlan tahay, laakiin waa inaad fahamtaa in tani ay tahay geedi socod dheer oo socod dheer, sidaas darteed haddii aad si degdeg ah ugu baahan tahay warshad buuxda leh taajajin, ka dibna waxaa macquul ah in laga fekero ku saabsan helidda baadiyaha oo dhan hal mar. Mustaqbalka, waxaad ku dhufan kartaa habka horey loo soo sheegey ee loo yaqaan 'grafting'.